Iindaba zesiXhosa, 19 eyokwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 19 eyokwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 19/03/2019
Bazakuvela enkundleni abanamatyala e-Etoll
Basengazibhaqa sele bebekwa kuluhlu labantu abangafanelanga ukuthengiselwa ngetyala abaqhubi abangazithatheli ngqalelo iimbalelwano kwakunye nomsila wengwe wokuba bavele enkundleni mayelana namatyala e-Etoll. Inkampani i-Electronic Toll Collection eqokelela amatyala e-Etoll phantsi komyalelo weArhente yezendlela yeli lizwe uSanral ithi zingaphaya kwamawaka amabini ukuya kumawaka amane iimbalelwano ezithunyelwe kwabo bangekawahlawuli amatyala abo. I-ETC ithi azakugqwaliswa amagama abo banamatyala kubanikezeli beenkonzo zezimali abagunyazisiweyo. Ukanti umbutho ochasene nokuxhatshazwa kwemali yerhafu i-Outa ichasene neli nyathelo ngelithi le nyewe isesezinkundleni.
Ixabiso lamafutha lizokonyuka kungekudala
Bazakuzifaka zime ngeengqiniba izandla ezitasini abaqhubi bezithuthi xa sukuba befuna abafutha ezithuthi nanjengoko kulindeleke lintinge ixabiso lawo kwinyanga kaTshazimpuzi. Inkampani i-Automobile Association iqikelela ukwenyuka kwePetrol ngerandi enye neesenti ezilishumi elinesibhozo ze i-diesel yenyuke ngeesenti ezingamashumi alithoba. Ophuma kwa-AA umnumzana Layton Beard uthi oku kubangelwa kukuntinga kwala maxabiso kumazwe ngamazwe kwakunye nobunkene-nkene berandi yeli lizwe ndawonye nokwenyuka kwerhafu yamafutha ezithuthi edizwe ngumphathiswa wezimali weli lizwe umnumzana Tito Mboweni.
Azolile amadama kweli lentshona koloni
Uzinzile noko umthamo wamanzi kumadama angoovimba eli phondo leNtshona Koloni kwezi veki zimbini zidlulileyo. Kungokunje kule veki umthamo wamanzi ume kumyinge wamashumi amathathu anethoba nemivo esibhozo ekhulwini phof’ube uthe xhaxhe ngamashumi amabini eepesenti xa kuthelekiswa neli lixa kunyaka ophelileyo. Ukanti umyinge wamanzi kumadama athululela isixeko seKapa umi ku51.58% nalapho idama i-Berg River lingu72% ze i-Voelvloei ime kumashumi amathandathu anesithathu eepesenti. Izinga eTheewaterskloof limi kumashumi amane eepesenti ze i-Clanwilliam ime kumyinge wamashumi amabini anesixhenxe ekhulwini kule veki. Umphathiswa woorhulumente bamakhaya nemicimbi yemveli umnumzana Anton Bredell uthi enye into ebe luncedo kukumimitheka komlambo i-Gouritz River ethululela amanzi kummandla weKaroo kodwa noko kunjalo uthi imbalela ayikapheli.
Usatsho njalo udanya cimiwombane
Uyaqhuba nanamhlanje ucimi-cimi wombane phof’eqalisa ngezinga lesibini lokuphungulwa komthwalo ukususela ngentsimbi yethoba kusasanje ze wenyukele kwizinga lesine ukusingisa kwintsimbi yeshumi elinanye ebusuku. Inkampani enkinkisha umbane kweli u-Eskom uthi oku kubangelwa kukushokoxeka kombane ophehlwayo kwaye abasebenzi bezobuxhaka-xhaka bombane bamanxada-nxada belungisa oomatshini bokuphehla umbane. Le nkampani ikwabongoz abahlali ukuba bacime iigeyser zabo kwakunye nezinye izinto ezilayitayo ezingeyomfuneko ingakho emini khon’ukuze kuphunguleke umthwalo. Ucimi-cimi ombane uye waqinisa kwimpela-veki esiyifulathelayo ngenxa yokushokoxeka kwe-diesel kwakunye nombane osuka kwiprojekthi i-Cahorra Bassa kwilizwe laseMozambique elithwaxwe yinkanyamba.
Zininzi iintetho eziphumayo ngenkampani yezixhobo
Usekela mlawuli wesebe lamashishini karhulumente umnumzana Kgathatso Tlhakudi uthi ufuna ukufakana imilomo nabantu abaphatheke kakubi ngelixa lakhe kwinkampani yezixhobo u-Denel. Uthi baninzi abantu abanomdla wokuthetha malunga nokwenzekayo kubo ngenxa yokuba kukho umphathiswa omtsha ngoku. UTlhakudi ebenikezela ngobungqina kwikomishoni kaZondo ephanda ukubanjwa ngesixhanti kukarhulumente weli lizwe ngoosomashishini babucala. Kusenjalo usihlalo wale komishoni ujaji Raymond Zondo uthi umothulela umnqwazi lokaThlakudi ngokuba nesibindi sokunikezela ngobungqina esithi onke amaxhoba akwaDenel maweze ngaphambili.
Liphezulu inani labantu abaphululukene nobomi babo eZimbabwe
Lenyuke laya kumashumi alithoba anesithandathu inani labantu abathe baphulukana nobomi kwilizwe laseZimbabwe emva kokuthwaxwa yinkanyamba u-Idai kummandla osempuma nasemazantsi ela lizwe. Le yintlekele emandla kwilizwe elijamelene neengxaki zezimali nembalela kwaye kukhona uya ubonakala umonakalo kanye ngelixa abahlanguli befikelela kwiindawo ezichaphazelekileyo kufutshane nomad welizwe laseMozambique. Umoya obhudla ngamandla eekhilomitha ezilikhulu elinamashumi asixhenxe ngeyure ubangele ukuba inkqila i-Chimanimani iqhawukelwe ngumbane,kwatshabalala izindlu,iindlela neebhulorho nto leyo ibangela kube nzima ukufikelela kuyo. Ukanti umbutho wezizwe ezimanyeneyo uthi usebenza ngobambiswano noorhulumente abachaphazelekileyo kumazantsi elizwekazi i-Afrika kwakunye nelaseIndonesia.